मेरी आमाको कारूणिक कथा: नरेन्द्रराज प्रसाई « LiveMandu
२५ जेष्ठ २०७६, शनिबार १२:५१
एउटै प्रकृतिको काम भएकाले प्रसाई र उप्रेतीहरुवीच घनिष्ठता पनि बढ्दै गयो । उनीहरुले एकअर्काको परिवारको चासो राख्दा दुबैका पत्नीहरु गर्भिणी भएको बेहोरा पनि चाल पाए । त्यसै बेला उनीहरुले आआफ्ना सन्तानहरु छोरा र छोरी जन्मे भने एकअर्कामा कुटुम्बेली सम्बन्ध गाँस्ने निधो पनि गरे । यथासमय उप्रेतीका घरमा छोरी र प्रसाईका घरमा छोरा जन्मे ।
मेरा बाजे नरध्वज प्रसाई त्यस भेककै कहलिएका धनी थिए । त्यस युगमा कागजी पैसा थिएन, धातु मुद्राको चलन थियो । अनि हाम्रो घरमा पैसा हातले गन्ने चलन थिएन । धातुका पैसा एक पल्ट गनेर पाथीमा भरिन्थ्यो । अनि हरेक पल्ट पाथीले भरेर हिसाब राख्दै ठूलाठूला घ्याम्पामा थन्काइन्थ्यो । यसै प्रसङ्गमा मेरी आमा भन्थिन्- “त्यस बेला पैसा गन्दा म थाक्ने गर्थें ।”
नरध्वजका पाँच भाइ छोरामध्ये जेठा खडानन्दलाई युधिष्ठिर, माइला मानबहादुरलाई भीम र मेरा बुबा जयप्रसादलाई अर्जुन भनिन्थ्यो । मानबहादुर भन्नु नरध्वजका कान्छी पत्नीका छोरा थिए । त्यस बखत यी तीनको मतो मिल्थ्यो । भनौं ती भाइमध्ये एउटाले बोलेपछि अरु दुई भाइले बूढीऔठा थिच्थे । अनि सानै उमेरमा ज्ञानको प्रखरता भएकाले मेरा बुबालाई जिजू पनि भनिन्थ्यो ।
हाम्रा बुवाआमा सामाजिक काममा नै धनखर्च गर्थे । उदाहरणका लागि भन्ने हो भने- काठमाडौंबाट घर फर्केपछि मेरा बुवाले मेरी आमालाई पशुपतिनाथको महिमा, गरिमा र महत्ताको बेलिबिस्तार लाए । अनि त्यसै वर्ष अर्थात् १९९५ साल कृष्ण अष्टमीमा हाम्रा बुवाआमाको जेठो छोरा विष्णुभक्त प्रसाईको जन्म भयो । अति खुसी भएर मेरा बुवाले मेरी आमालाई सोधे, ‘तिमीले छोरो पाएको उपलक्ष्यमा म तिमीलाइ के उपहार दिउँ ?’ मेरी आमाले पनि आफ्ना पतिसँग पशुपतिनाथ झैं सानो मन्दिर आफ्नै घरपरिसरमा थापिमागिन । मेरी आमाको इच्छालाई साकार पार्न युधिष्ठर, भीम र अर्जुन लागिपरे । जसअनुरुप उनीहरुले हाङपाङमा चार ढोका भएको शिवालय बनाए । यतिमात्र होइन यी तीनै भाइ मिलेर हाङपाङको मेलेमा च्यादरपाटी र तीनधारेहिटी पनि बनाए । अनि ठाउँठाउँमा मूलबाटो बनाउन पनि यी तीन भाइ नै अग्रसर हुन्थे ।
मेरी आमा ३५ वर्षकी थिइँन्; घर लिप्ने रातोमाटो खन्न गएकी मेरी आमालाई त्यति बेला पहिरोले पुरेको थियो । त्यस बेला मेरी आमासँगै पम्फा दिदी पनि थिइन् । त्यसैले आँत्तिएर दिदी पम्फा सिटौला नै चिच्याउन थालिन् । अनि एकै छिनमा आफन्तको भिड लागिहाल्यो । कपाल बाटेको धागोको रातो फुर्कोका आधारमा वीरमान भुजेलहरू भएर विस्तारै खनेर मेरी आमालाई पहिरोबाट निकालिएको थियो । त्यसबेला उनका पेटमा सात महिनाको नानी थियो ।
मेरी आमा निरक्षर थिइन् । तर उनी आफ्ना छोराछोरी लगायत गाँउका बालबच्चाको समेत शिक्षाका लागि मरिमेट्थिन् । त्यस ठाँउमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने काम पनि मेरी आमाबाटै भयो । उनैले आफ्नै गोदाममा स्कूलको स्थापना गरिन् । त्यसबेला स्कुल पढ्ने परिपाटि नभएकाले स्कुल खोले पनि बालबालिका पढ्न आउन मान्दैनथे । त्यसैले मेरी आमाले धनीका छोरालाई मीठाई खुवाएर र गरीबका छोरालाई खानापिनाको समेत प्रबन्ध गरेर स्कुल आउन पल्काएकी थिइन् । मेरी आमाको स्कुलमा थुप्रै नन्दकुमार प्रसाईहरूले पढेका थिए । साथै पछि हाइस्कुल पढ्नेहरुका लागि पनि मेरी आमाले त्यहाँ निश्शुल्क छात्रावास बनाएकी थिइन् । जिजु हाउस नाउँको उक्त छात्रावास मेरी आमा कै घर थियो । त्यसैले उनका बारे तेजबहादुर प्रसाईले लेखे- ‘हाम्री आमा भागीरथा प्रसाई निरक्षर भएर पनि चेतनाकी प्रखर नारी थिइन् । सङ्घर्षपूर्ण जीवन यापनका साथै उनमा भएको सामाजिक भावनाको प्रचुरता स्तुत्य छ ।’
शिवालय वनेपछि हाम्रा घरमा प्रायः जोगीहरूकै बास हुन्थ्यो । अनि मेरो जन्म पूर्व मेरा बुवा पनि जोगी भएरै हिंडे । बुवाको मन फर्काउन मेरी आमालाई १२ वर्ष लागेको थियो । तर त्यसपछि मेरा बुवा क्रमशः क्रमशः सिथिल हुँदै गए । त्यतिन्जेलसम्ममा मेरी आमापटि्टबाट हामी पाँच छोरा र एउटी छोरी जन्मिसकेका थियौं । अन्ततः मेरा बुबा २०२० साल असार ४ गते स्वर्गीय भए । चौवालीस वर्षको उमेरमै मेरी आमा विधवा भइन् र उनले अर्थिककष्ट पनि खेप्न थालिन् । यसै प्रसङमा नन्दकुमार प्रसाईले लेखे ‘त्यसपछि उहाँकै आफन्तले उहाँको सम्पत्तिमा गिद्दे दृष्टि लगाई आर्थिक धक्का पुर्‍याएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि साइँली आमाबाट सौता र सौतापटि्टका छोराछोरीहरूका साथै आफ्ना लालाबाला स्याहार्ने काम भयो ।’ (नन्दकुमार प्रसाई भन्नु मेरी आमाकी सौताकी दिदीका छोरा अर्थात मेरा बुबाका साढुदाइका छोरा हुन्।)
त्यसबेलाको सामाजिक मान्यता अनुरुप मेरी आमालाई माइतबाट मैतालु पठाँउदा ‘कि घर गरेर खानू, नसके तमोरमा हाम फालेर मर्नु’ भनिएको थियो । त्यसैले आफ्ना पतिको निधनपछि उनी आर्थिक दृष्टिले तलतल र तल झर्दै जाँदा पनि सङ्घर्ष नै गरिरहिन् तर उनले माइती कहिल्यै गुहारिनन् । खनूपरुदे रामबाबू प्रसाईले लेखे अनुसार उनले ‘सुनसरीको सुख्ख र पितलसरिको दुक्ख पाइन् ।’ वास्तवमा उनी जीवनसँगको सम्झौताको पूर्ण निष्ठामा बाँधिएकी थिइन् ।
मेरी आमा एकैछिन पनि फुर्सतमा बस्तिन थिइन् र हात बाँधेर बस्नेलाई पनि मन पराउँदिन थिइन् । उनी हरेक प्रकारका सीपले सजिएकी थिइन् । उनले समयसन्दर्भ अनुसार नजानेको र नगरेको कुनै काम पनि थिएन । साथै उनी आशुकवयित्री पनि थिइन् । मेरा बुवाले वाचन गरेका पुस्तकहरुका सैयौं श्लोक उनलाई कण्ठाग्र थिए । सुरिलो भाकामा उनी गीत पनि गाँउथिन् । उनी चार्डपर्वमा साथीसँगीसँग नाचगान गर्न पनि औधी मन पराउँथिन् । साथै उनीमा बरबगैंचाको निर्माण गर्ने सीप पनि थियो । चाहे ताप्लेजुडमा होस् र चाहे झापामा होस् उनले आफ्नो घरमा लोभलाग्दो बरबगैंचा बनाएकी थिइन् । उनको जिन्दगानीका सम्पूर्णपाटो एकएक केलाएर इन्दिरा प्रसाईले ‘मेरी सासू’ नाउँको ग्रन्थमा समेटिन् ।
ब्लडक्लटका कारणले रहेछ मेरी आमाको चेतनाको पूर्ण जीवन थिएन । भनौं उनी केही पनि चाल पाउँदिन थिइन् । कतिसम्म भने उनले मलाई समेत चिन्न गाह्रो मान्थिन् । आमाको अवस्था हेरेर रूनुको विकल्प मसँग केही थिएन । केही दिनपछि इन्दिराले भनिन्- “आमालाई मस्तिष्कको नसा सम्बन्धि केही भएको छ । म विजया (डा.वसन्त पन्तकी श्रीमती प्रा.डा.विजया पन्त) भाञ्जीसँग कुरा गर्छु ।” डा.पन्तकोमा पुग्ने क्रममा हामी डा.कपिलदेव उपाध्याय समक्ष पुग्यौं । त्यसपछि डा.वसन्त पन्त छेउ हामीले आमालाई पुर्यायौं । डा.पन्तले २०६२ साल जेठ २७ गते आमाको टाउकाको शल्यक्रिया गरेका थिए । त्यसपछि मेरी आमाको जीवन पूर्ण रूपमा पहिलाकै जस्तो सग्लै भयो ।
मोडेल अस्पतालमा मेरी आमाको सेवार्थ छोरा कञ्चनजङ्घा र छोरी अनुकृतिका अनि भाञ्जा अर्जुन सिटौला अहोरात्र जुटेका थिए । अनुकृतिकालाई देखेपछि मेरी आमा थप खुसी हुने गर्थिन् । झन् उनको सेवाले आमालाई थप राहत दिने गर्थ्यो । साथै मेरी साली कल्पना र भतिज माधव नेपालले पनि त्यस बेला फेरि पनि अर्को गुन लगाएका थिए । साथै प्रा.डा.भीष्मराज प्रसाई र प्रा.डा.रामप्रसाद उप्रेतीले पनि मेरी आमाको निगरानी राखिरहे ।
मेरी पत्नी इन्दिराले मेरी आमाका हर इच्छा पूरा गरिदिन्थिन् । आमाको औषधी, खानापिना, लुगाफाटाका लागि इन्दिरा सधैं अग्रसर हुन्थिन् । आमालाई के मीठो लाग्छ र कुन लुगा मन पर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुँदैनथ्यो । आमाका लागि सबैसबै उनैबाट नै काम सम्पन्न हुन्थ्यो । आमा केही अस्वस्थ हुँदा पनि इन्दिराको पूर्ण समय आमाकै कोठामा वित्ने गर्थ्यो । अनि आमा अझ अस्वस्थ हुँदा उनी आमासँगै सुत्ने गर्थिन् । वास्तवमा उनी मेरी आमाकी करूणाकी देवी थिइन् । मेरा ठूल्दाइ र ठूली भाउजू अनि भरत दाइ र रूपा भाउजूले पनि यस विषयलाई समेत लिएर सधैं इन्दिराको वयान गर्थे । साथै मेरी आमाले घरीघरी भन्ने गर्थिन्- “इन्दिरा मेरी बुहारी होइन, आमा हो ।”
मेरी आमा घाम तापेर घरकै छतमा बस्थिन् । तर मङ्सिर २४ गते उनी हिंडेर तल कोठामा पुग्ने अवस्थामा थिइनन् । अनि आमाको भदा प्रा.डा.रामप्रसाद उप्रेतीले पिठ्युमा बोकेर आमालाई कोठासम्म ल्याए । त्यस दिनदेखि मेरी आमाले कहिले आकाश देख्न सकिनन् । अनि मेरी आमाकै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर डा.उप्रेतीले “अन्तिम आकाश” नामक निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशनमा ल्याए ।
मेरी आमाको मेरो छोरो कञ्चनजङ्घा अति भक्त थियो । हर साँझ ऊ आमाका खुट्टामा तेल लगाउन आमाको कोठामा जान्थ्यो । जीवनको अन्त्यमा मेरी आमाले पनि आफ्नो नाति कञ्चनजङ्घा खोजिरहिन् । आमालाई भेट्न जोजो पुगे पनि उनी अर्ध चेतनामा बोल्थिन्- “कञ्चनजङ्घा आयो ?” अर्को एक दिनको कुरा हो; नर्वेबाट इन्जिनियरिङमा एम.ई. पढेर आएको ठूल्दाइको कान्छो छोरा सन्देश कोसेली बोकेर आमालाई भेट्न आउँदा आमा बेहोसीमै बोलेकी थिइन्- “कञ्चनजङ्घा हो !”
कञ्चनजङ्घा अमेरिकामा भएपनि हरदिन आमासँग स्काइपमा बोल्थ्यो । पछिपछि आमा अर्ध चेतनामा हुँदा पनि उसले आमालाई दिनदिनै हेर्ने गर्थ्यो । अन्तत: आमा स्वर्गीय भएका दिन पनि उसले स्काइपबाट नै आमाको भौतिक चोलाको अन्तिम दर्शन गर्यो ।
आमालाई गाह्रो भएछ । इन्दिराले आमाका छाती सुम्सुम्याउन थालिन् । मेरी आमाका गालामा मैले म्वाईँ खाएँ । अनि आमाका दुबै गालामा मेरा दुबै हात राखें । अनि मैले भक्कानिएर इन्दिरालाई भनें “आमा जानु भयो ।” अन्तत: त्रियानब्बे वर्षको उमेरमा काठमाडौंको आफ्नै घरमा मेरी आमा ब्रम्हलिन भइन् ।
मेरी आमालाई मेरा ठूल्दाजुले दागवत्ती दिए । त्यसपछि आर्यघाटमा नै मेरी आमासँगको मेरो भौतिक सम्बन्धमा विराम लागेको थियो ।
ठूल्दाजु विष्णुभक्त प्रसाई, भरत दाइ, कान्छो भाइ गङ्गाराज र मैले नइ गृहमा नै बसेर आमाको १३ दिनसम्म क्रिया बार्यौं । हामीसँगै नीरा दिदी र रूपा भाउजू पनि साथै थिए ।
मेरो छोरो डा. कञ्चनजङ्घा म‌ैले एक पैसा, एक लाल सुनचाँदी र एक चप्परी जग्गा पनि पैत्रिक सम्पति नलिएकोमा गौरवीबोध गरिरहन्छ । त्यतिमात्र होइन, मेरी आमाको जीवनको उत्तरार्धमा उनको सबै चल, अचल सम्पती हात पारिसकेपछि आमासँगै बसेका आफ्नै कान्छो छोरा र बुहारीले आमालाई घाँडो, असेटो र बोझ मान्न थालेका थिए । त्यतिखेर उनीहरू आमालाई घरबाट कसरी लघार्ने भन्ने दाउ खोजेर बसेका थिए । यति हो उनीहरूले आमालाई घोक्र्याएर निकाल्न मात्र बाँकी थियो । आमाको त्यो दुखद हालतको समाचार सुनेपछि म झापा गएँ र आमालाई काठमाडौं लिएर आएँ । त्यसपछि मेरी आमा १३ वर्षजति नइ गृहमा नै बसिन् । आमाको सम्पूर्ण सेवामा हामी नइले आमाको जेथो अथवा भनौं कुनै प्रकारको भौतिक (धन) केही पनि नलिई तन, मन , धनले आमा उपर बाह्रै मास समर्पित भएर हामी लागेका हुन्थ्यौं । वास्तवमा त्यस बखत हामी आर्थिक रूपले कमजोर नै पनि थियौं । तर पनि अङ्शियारसँग समेत हामीले कुनै गुनासो पनि गरेनौ र माग पनि गरेनौं । मेरी पत्नी र छोराले पनि कहिले कसैको लोभ र आशा नै गरेनन् ।
मेरी आमा स्वर्गीय हुनुभन्दा छ महिनाअघि नै मेरो छोरो कञ्चनजङ्घा अमेरिकाको सरकारको छात्रवृत्तिमा पिएचडी गर्न लुइजियना राज्य विश्वविद्यालयमा पुगिसकेको थियो । ऊ नयाँ विद्यार्थीका रूपमा त्यहाँ बामे सर्दै थियो । तर पनि उसले आफ्नो निष्ठा प्रकट गर्यो- “माता (मेरी आमालाई सबै बुहारी र नाति, नातिनाले माता भन्थे) को म पनि नाति हुँ । त्यसैले माता उपर मेरो पनि जम्मेवारी र कर्तव्य रहन्छ । मेरी माताको १३ दिनसम्मको काम र बरखी अनि त्यसपछि लगाइने पुराणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च म नै बेहोर्छु ।” छोराको कुरा मलाई र इन्दिरालाई मनासिव लाग्यो र मेरा दाजुभाइलाई पनि मैले त्यही सन्देश दिएँ । त्यसै अनुसार आमाका नाउँमा गरिने सबै कृत्यका लागि सम्पूर्ण खर्च छोराले नै पठाई दियो । साथै प्रसाई वङ्शीय १० दिने दाजुभाइको स्वर्गारोहणको दसौं दिनमा वङ्शीय दाजुभाइबाट सघाउ दिइने प्रचलन पनि छ । त्यस बेला प्राप्त भएको सो रकम पनि मैले मेरा ठूल्दाजु मार्फत झापाको शनिश्चरे माद्यामिक विद्यालयमा समर्पण गरेको थिएँ ।
(© प्रकाशोन्मुख “मेरी आमा: भागीरथा प्रसाई” जीवनीबाट सारसङ्क्षेप)